नयन दाईको त्यो म्यासेज, जसले मलाई पाठकमाझ पुर्‍यायाे
परिवर्तन देवकोटा २४ फागुन ।
काठमाडौँ । राजधानी, त्यसमा पनि सबैको आकर्षणको शहर । अनि त्यहि शहरभित्र रमाउने रहर । हो यस्तै, यस्तै । असल शिक्षा पाउने आशामा जनकपुरबाट २०६३ मा काठमाडौँ छिरेका थिए उपन्यासकार निमेष पौडेल । राजधानी काठमाडौं आएपछि ५ कक्षाबाट उनले आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिए ।
बुबा सरकारी कर्मचारी । आमा गृहिणी । घरको आर्थिक स्थितिले खासै प्रगति गरेको थिएन । ‘जनकपुरबाट यहाँ आउँदा म एकदमै अन्जान थिएँ,’ उनले भने, ‘तर पनि रहरहरु निकै चञ्चल । म पनि चञ्चले उस्तै थिएँ ।’ कक्षा ५ मा उनको शिक्षकहरुमध्ये एक थिए विष्णु प्रवा सापकोटा । उनी लेखक अनि साहित्यकार थिए । त्यतिखेरै उनको एउटा मुक्तक संग्रह प्रकाशन भयो । उनलाई सम्मान मिल्यो । त्यसपछि लेख्ने भोक लाग्न थाल्यो, निमेशलाई पनि ।
उनी भन्छन्, ‘सरको मुक्तक संग्रह निक्लियो त्यसपछि मलाई पनि केहि लेखौँ, केहि लेखौँ हुन थाल्यो । मन झनै चञ्चले ।’ उनलाई पढ्ने र लेख्ने भोक जाग्न थाल्यो । उनी प्यासी भए । कक्षा ६ मा पढ्दै गर्दा उनी पत्रिकाको सौखिन हुन थाले । सधैँ पत्रिका पढेर किन्न पैसा हुदैनथ्यो । पत्रिका पढ्नकै लागि विरालोले मुसा ढुकेझैँ गर्थे । अरुले पत्रिका पढुन्जेल पर्खिन्थे र छाडेपछि बल्ल आउँथ्यो उनको पालो ।
एक पत्रिका, जसले उनलाई पढ्ने भोक जगाईरहन्थ्यो । जति पढेपनि अघाउँदैन थिए उनी । उनी भन्छन्, ‘त्यसपत्रिका प्रकाशित कथा, कविता, निबन्ध, मुक्तकलगायतका कुराहरुले मलाई जहिल्यै ताजा बनाईराख्थ्यो । मलाई पढ्न भोक जगाईराख्यो ।’
त्यत्तिकैमा वित्यो २/३ वर्ष । कक्षा ९ को सुरुवातसँगै लेखनयात्रा सुरु गरे । मुक्तक लेख्न थालेँ । त्यतिखेर झापाबाट एउटा रेडियोमा कार्यक्रम मुक्तकमाला बज्थ्यो । त्यसमा उनकै मुक्तक पहिलोपटक वाचन गरे ।
पौडेल भन्छन्, ‘मुक्तकमालामा मेरो मुक्तक बज्नु मेरो लागि महत्वपूर्ण रह्यो । बलिरहेको बत्तीमा तेल थप्ने काम भयो । म झन्झन् बल्न थालेँ, निरन्तर ।’ त्यसपछि मुक्तक लेख्ने हुटहुटी चलिरह्यो उनमा । लेखिरहे केवल लेखिरहे ।
एसएलसी जसलाई फलामे गेटको रुपमा लिन्छौं । त्यही फलामे गेट पार गरेपछि उनको कलमी यात्रा बदलियो । पत्रिकामा आएका कथाहरुले उनमा पुनः कथाको भोक जगायो । अनि लेख्न थाले कथाहरु । कथाहरुको बारेमा सुझाव लिन्थे अग्रज साहित्यकारहरुसँग । ‘अग्रजहरुले कथा हेर्नुहुन्थ्यो । उहाँहरुले ठिक छ भनेपछि ममा झनै जाँगर बढ्दै जान्थ्यो,’ उनले आफ्नो उत्साह साटे ।
उतिवेला अहिलेजस्तो सर्वसुलभ थिएन सञ्चार । त्यसमा पनि काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकामा त हाम्रो पहुँच पुग्ने कुरा नै भएन । कथा छाप्न बाहिर पठाउनुपथ्र्यो । विरगञ्ज, जनकपुर लगायतबाट निस्कने पत्रिकामा उनका कथाहरु छापिन थाले । उनमा लेखक बन्ने आकांक्षा बाक्लियो ।
नयन दाईको त्यो म्यासेज
कक्षा १२ पछिको एक दिन । त्यो दिन चर्चित साहित्यकार नयनराज पाण्डेयसँग उनले म्यासेजमा सोधे, दाई कथा धेरै नै लेखेँ । अब उपन्यास लेख्न मन छ, कसो होला ? त्यसपछि उनले रिप्लाई गरे । हुन्छ नि, राम्रो हुन्छ, तर अध्ययन गर्नु धेरै अनि लेख्न थाल्नु ।
उनी आफुलाई उपन्यास लेख्नका लागि सुरुमा नयनराज पाण्डेले उर्जा दिएको सम्झन्छन् । उनी भन्छन्, ‘नयन दाईले त्यो म्यासेजको रिप्लाई नदिनुभएको भए वा सोचअनुकुल नभएको भए म आज पाठकहरुमाझ हुने थिईन । म लेखक पनि रहने थिइन ।
‘म काठमाडौँका सडकहरुमा धेरै हिँड्थेँ । विशेषगरी अध्ययनका क्रममा । मलाई उपन्यास लेख्नका लागि अध्ययन गर्नु थियो । त्यतिखेर मैले धेरै थरीका प्रेम जोडी र उनीहरुको व्यवहार नजिकबाट नियाल्न थालेँ,’ उनले सम्झिए, ‘बाटोमा हिँड्दा धेरै थरीका प्रेम जोडीहरु देखिन्थे । कोही रमाउँदै हिडेका त कोही झगडा गर्दै । यी कुराहरुले खुब सताईरह्यो ।’ त्यसपछि नै उपन्यास उनमा लेख्ने आँट बढेका थियो ।
उपन्यास लेखन सकियो । उनी प्रकाशन गृह धाउन थाले । प्रकाशनका लागि धेरै प्रकाशकको ढोका ढकढक्याए । त्यसपछि अच्युत घिमिरेको बुलबुल पब्लिकेसनले उनको उपन्यासलाई पत्यायो । अनि छापियो ‘फाईभ मन्थ्स्’ ।
‘आजकल सेक्स नर्मल भैसक्यो । पछिल्लो समय युवायुवतीहरुले प्रेमलाई गहन रुपमा लिन थालिसकेका छन्
उपन्यास छापिएलगत्तै उनी लागे अर्को उपन्यास ‘फेब्रुअरी १४’ को लेखनमा । उनको यो उपन्यास पनि प्रकाशित भयो । उपन्यासमा उनले एक छोरालाई उभ्याएका छन्, जसका बुबा छैनन् । उनै छोराले आफ्नो आमा, प्रेमिका तथा साथीसँगीलाई गर्ने व्यवहारलाई उतारेका छन् । उनी भन्छन्, ‘फेब्रुअरी १४ मा दुरीले प्रेम घटाउँदैन भन्ने कुरालाई उतारेको छु ।’
अनि उनको प्रेम...
उपन्यासकार निमेष पौडेलको आफु अनुकुल विष्लेशण गर्नेहरु धेरै छन् । प्रेम लेखेकै कारण पनि उनले धेरै फ्यान कमाएका छन् । उनी प्रेममा नै केन्द्रित भई उपन्यास किन लेख्छन् त ? उनी भन्छन्, ‘प्रेम नै मैले नजिकबाट नियालेको विषय हो । यसमा नै म धेरै डुबेको छु । यदि मैले प्रेमभन्दा बाहिर गएर उपन्यास निकाल्न चाहेँ भने धेरै समय खर्चिनु पर्छ । अध्ययनका लागि नै धेरै समय लाग्न सक्छ ।’
‘आजकल सेक्स नर्मल भैसक्यो । पछिल्लो समय युवायुवतीहरुले प्रेमलाई गहन रुपमा लिन थालिसकेका छन्’, सेक्सबारे उनको बुझाइ हो यो । आफुले उपन्यासमा प्रेमलाई प्रस्तुत गरेको उनको दावी छ । ‘युवायुवतीमा पहिले आकर्षण हुन्छ, अनि विस्तारै सेक्समा ध्यान दिन थाल्छन् । र पछि विस्तारै त्यो पनि हराउँछ र दुवै एकअर्काको केयरीङमा ध्यान दिन्छन् ।’ यहि विषय उनले उपन्यासमा उतारे ।
एकाथरिले भने उनी प्रेममा परेको र उनले आफ्नै कथाव्यथालाई उपन्यासमा उतारेको पनि तर्क गरे । तर उनले आफु अहिले प्रेममा नपरेको प्रस्ट्याए । तर, उनी आफु प्रेममा नपरेपनि प्रेमलाई नजिकबाट नियाल्याछन् ।
पुस्तक लेख्दै गर्दा उनले अचम्मका फ्यान पाए । कसैले उनको नाम नै मुटुमा सजाए भने कसैले चर्चित व्यक्तिवहरुमार्फत प्रेम प्रस्ताव राखे । ‘मलाई फ्यानले निकै माया प्रेम गर्नुहुन्छ । उहाँहरुको मायाले नै मलाई लेख्न हौस्याईरहन्छ । उर्जा मिलिरहन्छ,’ यो उनको अनुभुती हो ।
पौडेलका दुई उपन्यास ‘फाइभ मन्थ्स्’ र ‘फेब्रुअरी १४’ । उनका दुबै उपन्यासका नाम किन अंग्रेजीमा नै राखियो ? साहित्य भनेको भाषा होईन, भावना हो । त्यसकारण शिषर्क नेपाली नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । उपन्यासभित्र जे लेख्यो, टाईटल त्यहिँबाट लिने हो । यसो हुँदा भाषाको अवहेलना नहुने उनको बुझाई छ ।
फेब्रुअरी १४ को प्रकाशनपछि उनी अहिले नयाँ उपन्यास लेखिरहेको छन् । यसमा पनि उनले प्रेमलाई नै विषयवस्तु बनाएको बताएका छन् । ‘प्रेममा बग्न नै मलाई मजा लाग्न थाल्यो । म अझै १०/१५ वर्षपछिपनि प्रेममा बग्नेछु’, उनको योजना छ । नयाँ उपन्यासमा वास्तविक घटनामा आधारित प्रेम कहानी समेटिने उनले सुनाए ।
जब उनको पहिलो उपन्यास सार्वजनिक भयो, त्यतिवेला उनी १९ वर्षका थिए । किशोरावस्थामै उपन्यासमा लेखनमा लागेका उनलाई धेरैले प्रश्नसंगै तारिफ पनि गरे । ‘१८/१९ वर्षीय किशोरले उपन्यास लेख्नु भनेको कुनै सामान्य विषय होईन रहेछ, धेरैले मलाई गाली पनि गरे । तरपनि मैले लेखिरहेँ,’ उनले प्रश्न गरे, किशोरावस्थाको प्रेम, रहरलाई किशोरले नलेखे कसले लेख्ने ? अहिले नलेखे कहिले लेख्ने ?’
बिहेपछी यसकारण बढ्छ महिलाको हिप
'बोनम्यारो' पीडितलाई सहयाेग हस्तान्तरण
धारिलो हतियार प्रहार गरी युवकको हत्या
अण्डा भेज कि ननभेज ?
'मोनस्टर टोर्नाडो', अमेरिकाका ५०० घरमा क्षति
काउकुति लगाउँदा यसकारण हास्छन् मानिसहरु....